Uma kwenzeka ungakayiboni i-Vampire Diaries, ledada imayelana nentombazane encane ehlangabezana ne-vampyyri (izwakala ijwayelekile), kodwa-ke ihlangana nomfowabo futhi ngaleyo ndlela iqale unxantathu wothando. Kodwa-ke, umugqa wendaba ubandakanya iningi lamanye ama-twist, kufaka phakathi ama-doppelganger, abathakathi, izipoki, ama-ihmissudet, nazo zonke izinhlobo zezinye izimfanelo zemilingo ukutihihalenake äkillinen maisema.
Esikhathini seVampire Diaries esibizwa ngokuthi "Komeetan yö" (inkathi 1), indawo yokuvulwa yindoda nowesifazane besemahlathini. Inkungu ekhukhumezayo iwazungeza ngokushesha futhi inkhulumomphendvulwano yokuvula yile wesifazane ethi: "Uzwile lokho?"
Ingabe ukuvuleka kwakho okubandakanya? Kubalulekile ukuba gcina abafundi bakho banesithakazelo ngezingwegwe nama-hangers ekubhaleni kwakho konke Bheka indatshana kaJerry Low Bhala izinhloko ezifana noBrian Clark, Neil Patel, noJon Morrow: Blogilistat 35.
I-Spoiler: Ukusuka ku-Katherine engekho ethuneni, kuya ku-Bonnie wokuqamba amanga ngokufa kwakhe, ku-Elena ephenduka i-vampire, umbukiso ugcwele ukusonteka ngemuva kokusonta. Mhlawumbe elinye lama-twist amakhulu kakhulu wesikhathi sonke esisekupheleni kweSizini 6 lapho uKai ebeka u-Elena ebuthweni obuhle, obuhle bokulala ongeke avuke ngabo kuze kufe uBonie. Khuluma ngokuziphindisela kwakho okukhulu. Uvele wahlukanisa u-Elena noDamon (futhi) futhi waphatha kabi uBonnie kule nqubo ngoba ngeke esaphinde ambona u-Elena (noma uzokwazi? Mhlawumbe elinye icebo elisontekile?).
I-tontti ifuna ukubuka isihloko ngendlela ehlukile futhi ehlukile ngempela. Kusadingeka ukuthi kube nengqondo kumfundi futhi kube yinto engenzeka emhlabeni oye wasungulwa. Noma kunjalo, umgomo ukumangala umfundi.
Nikeza i-workshop -vuokrauspuhelinneuvottelu.
Sitten i-drone futhi uthathe isibhamu kusuka ekhoneni elihlukile bese ulayishe.
Engeza-pop up kuzo zonke izivakashi eziningi, ubapha i freebie.
Siyazi ama-quirks kyytiin. UDamon uyadabuka futhi usenza sihleke. U-Elena uzokwenza vuokra yini kulabo abathandayo. UCaroline ufuna izinto ziphelele.
Lokhu kuhumusha kanjani kubhulogi yakho? Abafundi bakho badinga ukwazi kuwe ezingeni lomuntu siqu. Noma, uma uneqembu, badge ukwazi abalobi bakho. Lokhu kuhilela izakhi eziningana:
Ama-elämäkerrat ahlanganyela kancane mayelana nomunye.
Abalobi beblogi (nabalobi bombhalo) bangasebenzisa isikhathi esinesi bakha okuqukethwe abakwazi ukuzizwa beshisiwe. Uma uchitha usuku nosuku phambi kwekhompyutheni yakho ngaphandle kokuphumula, cishe uzoqala umzabalazo wokuza nakho konke okuthakazelisayo ukukubhala ngakho.
Uma uzithola uhleli phambi kwekhibhodi yakho, ungakwazi ukuthayipha noma yini, yisikhathi sokugcwalisa kahle ubuciko bakho bokudala. UJulia Cameron ukhuluma ngokugcwalisa kabusha ubuciko bakho encwadini yakhe ethi “Artist’s Way”. Kubalulekile ukuthi abantu abanobuciko basebenzise isikhathi esithile benza eminye imisebenzi ukugwema ukuvinjelwa.